Horudhac: Leicester City Vs Tottenham Hotspur Ee Horyaalka Premier League-ga, Wararka Labada Koox Iyo Shaxda Macquulka
HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Leicester City Vs Tottenham Hotspur ee Horyaalka Premier League-ga, Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
kooxda Tottenham ayaa garoomada ku soo laabaneysa iyadoo Garoonka King Power Stadium ku booqaneysa kooxda Liecester City.
Iyadoo Antonio Conte uusan weli la kulmin guuldarro horyaalka ah isagoo ah tababaraha Spurs, kooxda reer London ayaa dib ugu soo laaban karta shanta kooxood ee ugu sareysa horyaalka Ingiriiska, halka kooxda martida loo yahay ay fadhiso kaalinta 10aad.
Leicester ayaa haysataa liis aan laga maarmi karin oo ka maqan Wilfred Ndidi , Daniel Amartey , Nampalys Mendy iyo Kelechi Iheanacho oo dhamaantood ku maqan koobka Qaramada Afrika, halka Wesley Fofana , Jonny Evans , Ricardo Pereira , Ryan Bertrand iyo Jamie Vardy ay hubaal tahay inay seegi doonaan dhaawacyo soo gaaray.
Dhanka kale, daafaca dambeedka midig ee Timothy Castagne iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Boubakary Soumare ayaa shaki laga muujinayaa laakiin waxaa laga yaabaa in loo yeero haddii uu u baahdo Rogers.
Maqnaanshaha Iheanacho iyo Vardy, Patson Daka ayaa hogaamin doona weerarka isagoo taageero ka helaya Ademola Lookman, kaasoo qaab ciyaareed cajiib ah kusoo bandhigay weerarka seddexaad, halka Kiernan Dewsbury-Hall lagu aamini doono inuu door muhiim ah ka ciyaaro khadka dhexe Youri Tielemans iyo James Maddison.
Si la mid ah kooxda martida loo yahay, Tottenham ayaa hubaal ah inay dagaal la galayso koox yar, iyadoo weeraryahanka Son Heung-min uu dhaawac kaga baxay.
Daafacyada dhexe Eric Dier iyo Cristian Romero iyo daafaca bidix ee Sergio Reguilon ayaa u baahan doona qiimayn dheeraad ah oo ay weheliyaan Steven Bergwijn , iyada oo afarta Daafac ay dhamaantood qabaan dhaawacyo kala duwan.
Harry Kane ayaa hogaamin doona weerarka isagoo caawinaad ka helaya Lucas Moura, kaasoo ku riyaaqay xoogaa dib u soo kabashada intii uu Conte hogaaminayay.